adịgboroja ajụjụ ọnụ
Version 0.5.7 - Pluggable wijetị
July 11, 2010 site na rịọ 37 Comments
Paul a na-ajụ Transposh egwuregwu
Anyị kpọrọ Paul oktopus ka Transposh maka di na nwunye nke na-eso ya beers ọhụrụ ihe ịga nke ọma n'ime ụwa iko. Anyị jụrụ ya, iji mee ka a ole na ole amụma anyị banyere na-abịa version nke Transposh, ma ebe ọ bụ na mgbe na-aṅụ nke ukwuu na ọ bụ n'ezie ikwenye ekwenye anyị nwere ohere ime ka onye nanị nyochaa ya.
Ke ikpehe enye ama akabade edi ọ dị ka nkịtị, eti anyị winking na octopuses ike n'ezie okwu. N'ihi ya, anyị kpebiri ịga abụọ igbe aghụghọ, anyị na-etinye n'igbe a mara mma nke ukwu, ọzọ nwere foto a mma (Na?), anyị chere ya ka na-emeghe whichever igbe enye okụtde ke odot. Ndammana o meghere ebe igbe, onye anyị hụrụ ka ihe dee kwesịrị ịdọ aka ná ntị na chinchi nwere ike ileghara anyị ule (ọbụna n'enyemaka nke asatọ njikere onye amụma na-arụ ọrụ anyị na QA). Anyị na-eji ohere ide a ọsọ ọsọ na onye ndu na ga-esi na mmepe version nke debugging anyị wiki.
Ndien akpatre leta, onye ọ bụla nke chọrọ inye anyị aka (ma ọ bụ ụkwụ), ma ọ bụ chọrọ ịkọrọ ya wijetị ihe e kere eke nke ụwa bụ karịa nabatara ịkpọtụrụ anyị.
-Enwe taa egwuregwu, ajụjụ ọ bụla Pọl ga-zigara ozugbo na ya.
P.S – na mbụ òkè nke ebe fixes ke, ofu ole na ole n'asụsụ MSN ịsụgharị ma kwukwara, ole na ole na-asụ asụsụ na ntọala (ka na akpaaka translatable – ma a ga-)
Mmelite: ekele a pụrụ iche nke ebe dị ụfọdụ ọnọdụ, 0.5.6 ama ese dochie anya na 0.5.7 ekele maka ndị niile na-akọ a, pụrụ iche ekele dgrut.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, adịgboroja ajụjụ ọnụ, obere, tọhapụ, wijetị, WordPress ngwa mgbakwunye